अनुमान बाहिरको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला « Harekpal
अनुमान बाहिरको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला
-हरेकपल टिप्पणी –
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विषयमा अनुमान गर्नु सजिलो छैन । उहाँको राजनीतिले उत्कर्षता पाएको निर्दलीय पञ्चायतकालको मध्यावधिदेखि नै हो । ०१७ को तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि जेलमा पर्नुभएको दाजु वीपी कोइराला र राजा महेन्द्रका बीचमा सेतु जस्तो वन्नु भएका कोइराला ०२९ पछि नेपालमा राजसंस्थाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभयो ।
निर्वासनबाट ०३७ वैशाख १ गते आममाफी पाई नेपाल फर्केपछि ००३ देखि दाजु वीपी कोइरालाले अख्तियार गर्नुभएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको सशक्त समर्थक बन्दै ०४० तिर विकल्प खोज्न सक्रिय हुनुभयो । उहां ०४२ को सत्याग्रह र ०४६ को जनआन्दोलनमा समेत त्यति सहज ढंगले संलग्न हुनुभएको थिएन । तर निर्दलीय पंचायतको अवशानसंगै कोइराला करीव १५ वर्षसंम नेपाली राजनीतिको प्रत्येक उतारचढावमा एकछत्र शीर्ष स्थानमा रहन पुग्नुभयो । उहांले सत्ता र शक्तिकालागि आफ्नै अनन्य मित्र र अग्रजहरुलाई समेत पाखा लगाउने काम गर्नुभयो ।
राजसंस्थाका घोर समर्थक र कम्युनिष्टहरुका पहिलो विरोधी कोइरालामा ०५८ सालपछि नाटकीय परिवर्तन आयो । खासगरी ०५८ असारको होलेरी काण्ड पछि कोइराला राजसंस्थाको उन्मूलन गर्ने सोच र निर्णयमा पुग्नु भयो र उहांले माओवादीसंग सहकार्य गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । अन्ततः नेपालको राजसंस्थाको विदाई गर्ने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुभयो । राजसंस्थाको विदाईसंगै संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । तर कोइराला पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति भने हुन पाउनु भएन । सायद कोइराला राजनीतिको अन्तिम असफलता यही नै भयो ।
कोइराला नेपाली कांग्रेसको सभापति थिए। उनी चार पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयाे । २०४८ जेठ १२ देखि २०५१ मंसिर १४, २०५५ वैशाख २ देखि २०५६ जेठ १७, २०५६ चैत्र ९ देखि २०५८ साउन ११ र २०६५ जेठ १५ देखि २०६५ भदौ २ १९९१ देखि १९९४, १९९८ देखि १९९९, २००० देखि २००१, र २००६ देखि २००८ सम्म। उहाँ सन् १९५९ पछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभएकाे थियाे। त्यति बेला उहाँका दाजु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र उहाँको राजनैतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक निर्वाचन अत्याधिक बहुमत ल्याएको थियो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र सात राजनैतीक दलहरूको मोर्चाको नेता हुनुहुन्थ्याे । उहाँ ६० वर्षभन्दा धेरै समय देखि राजनीतिमा संलग्न भएकाे थियाे । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनको सुरूवात, आफ्नो गृहनगर बिराटनगरको जुट मिलका श्रमिक नेताको रूपमा सुरू गर्नुभएकाे थियाे । वि.स. २०६६ साल चैत ७ गते मध्यान्ह १२ बजेर १० मिनेट जाँदा उहाँको निधन भयो।
कोइराला भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी भन्ने गाउँमा वि.स. १९८१ असार १८ मा जन्मनु भएकाे हाे ।त्यसबेला उहाँका बुबा-आमा निर्वासित जीवन बिताइरहनु भएकाे थियाे । गिरिजाप्रसाद कृष्णप्रसाद कोइराला तथा दिव्या कोइरालाका कान्छा छोरा हुनुहुन्छ । उहाँका दुई दाजुहरू वि.पी. कोइराला तथा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुभएकाे थियाे । सन् १९२९ मा परिवारसँगै नेपाल फर्कनु भएका गिरिजाले सुष्मा कोइरालासित विवाह गर्नुभयाे । सुजाता कोइराला गिरिजा प्रसादकी छोरी हुनुहुन्छ । उहाँले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तरगतको किरोरी मल कलेज(Kirori Mal College)मा अध्ययन गर्नुभएकाे थियाे ।
लामो कालखण्डसम्म कोइरालाको छायाछवि नेपाली राजनीतिमा निरन्तर देख्न पाइने छ । उहाँको योगदानलाई बिर्सन खोजेर पनि सम्भव हुदैन । आज कोइरालाको ९६ औं जन्मजयन्ती । यसबेला उहांप्रति हार्दिक संमान र शब्द श्रद्धा हरेक पलका तर्फबाट ।